Madaxweynaha Puntland: Canshuurta waa in la bixiyaa waana waajib dastuuri ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland: Canshuurta waa in la bixiyaa waana waajib dastuuri ah
July 12, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiwle Maxamed Cali. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay muran dhanka canshuurta ah oo u dhaxeeya dowladda iyo ganacsatada magaalada Boosaaso.
Shir saxaafadeed uu ku qabtay gudaha Garoowe maanta oo Arbaco ah kadib markii uu kasoo noqday Muqdisho oo uu shir uga soo qeybgalay, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ganacsatada u jeediyay in ay canshuurta bixiyaan muran la’aan.
“Canshuurtu waa canshuur sharci ah oo golaha wasiiradda la mariyay golaha baarlamaanka la mariyay canshuur dowlddu jeebka kala soo baxday ma jirto, waxaana weeye ijaarka guryaha laga qaado boqolkiiba afar bixiya weeye waxa laga qeylinayaa saxna maahan,” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli.
“Dalkan waxa weeye waxa uu rabaa difaaac waxa uu rabaa horumarin wuxuu rabaa in laga wada shaqeeyo, taasna waxaa laga rabaa in ganacsatadu fahanto, marka ka leex leexad maleh canshuurta waa in la bixiyaa waana waajib dastuuri ah.” Ayuu ku daray Madaxweynuhu.
Intii lagu guda jiray maalmihii dhawaa ee lasoo dhaafay, xarumaha ganacsiga Boosaaso ayaa xirnaa iyaga oo ganacsatadu ka cabanayaan canshuur kordhin ay sheegeen in dowladdu ku sameysay.
September 28, 2017 Ciidanka Ammaanka Puntland oo howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ka wada buuraha Galgala
Shiinaha oo saldhigiisii milatari oo ugu horeeyay oo dalka dibadiisa kuyaala ka furan doona dalka Jabuuti
Somalia is among an African Least developed countries (LDCs) and a fragile state. Due to several civil wars, floods and outbreaks, Somalian economy is considered to be one of the poorest and least developed in [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee Puntland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilaaban doonta asbuuca soo socda, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland. Bishii hore ee November, ayaa digreeto [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa nin sixiroole ah ku qabtay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari. Isaga oo warbaahinta la hadlayay, taliyaha booliiska Boosaaso Gaashaanle Sare Yuusuf Axmed ayaa sheegay in sixirooluhu uu [...]